WordPress टेम्पलेट: आगामी घटनाहरू भविष्यका पोष्टहरू प्रकाशित गर्नुहोस्
बुधबार, जुन 2, 2010 शनिबार, नोभेम्बर ०,, २०२० Douglas Karr
हामीले यसको लागि वर्डप्रेस माइक्रो-साइट निर्माण गरेका छौं डमीहरूको लागि कर्पोरेट ब्लगि। र एउटा सेक्शन राख्न चाहान्छौं जहाँ हामी आउने घटनाहरू तल्लो साइडबारमा प्रदर्शन गर्दछौं। यो गर्न समाधान वास्तवमै एकदम सरल छ र सीधा वर्डप्रेसमा निर्मित। तपाईंको विषयवस्तु भित्र, तपाईं केवल एउटा शृ add्खला थप्न सक्नुहुन्छ जुन केवल भविष्यका घटनाहरूका लागि प्रयोग गरिने विशेष श्रेणीको लागि मात्र प्रश्नहरू र भविष्यका पोष्टहरू प्रदर्शन गर्दछ:
<?php query_posts('order=ASC&बिरालो = & & post_status = भविष्य, प्रकाशित '); यदि (has_posts ()): जबकि (has_posts ()): the_post (); यदि (स्ट्र्टोटाइम (get_the_time ("F jS Y"))> समय ()): जारी राख्नुहोस्; अन्य: इको $ post-> आईडी; ?>
क्वेरी_पोस्ट विधि प्रयोग गरिएको क्वेरीमा प्रकाशित पोष्टहरू सीमित गर्नको लागि WordPress WordPress लूपको ठीक अगाडि राखिन्छ। किनकि यी भविष्यमा निर्धारित ब्लग पोष्टहरू हुन् (घटना मितिमा), तपाईंले उनीहरूको टेम्प्लेटमा तपाईंको मुख्य ब्लगमा प्रदर्शित भइरहेको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन। तपाईको कोटी सूचीबाट कोटीहरू लुकाउन चाहानु सक्नुहुन्छ, यद्यपि। तपाईको वर्डप्रेस टेम्प्लेटमा अपवर्जन विकल्प प्रयोग गरेर तपाईंको कोटी सूची सम्पादन गरेर यो पूरा गर्न सकिन्छ।
हामीले कार्यक्रमको लागि स्थान प्रदर्शन गर्न पोष्टका लागि मेटाडेटा पनि थपेका छौं। यो WordPress 'कस्टम फिल्ड्स सेक्सन प्रयोग गरेर पूरा भयो। केवल फिल्ड नामको लागि स्थानमा टाइप गर्नुहोस् र मानको लागि तपाईंको स्थान ... तब get_post_meta माथिको getman प्रयोग गरेर प्रदर्शनका लागि स्थान पुन: प्राप्त गर्नुहोस्।
नतिजा साइट एकदम राम्रो छ, धेरै अद्वितीय डिजाइन र रूपरेखा संग कि पुस्तक को प्रमोट गर्न सबै तत्वहरू छन्:
टैग: घटनाहरूभविष्यका पोष्टहरूWordPressWordPress घटनाहरूwp_list_categories
हामीले भविष्यका घटनाहरू पोष्ट र XML साइटम्याप जेनरेशनलाई भविष्यका पोस्टहरू प्रकाशित गर्न कस्टम फिड पनि बनायौं। यदि तपाईं अर्ने ब्राचेनवाल्डको एक्सएमएल साइटम्याप जेनरेटर प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, साइटम्याप-कोर.पीपीको लाइन १1747 लाई $where.=” (post_status IN ('publish','future') AND (post_type = 'post' OR post_type = ”)) “; अपडेट गर्न सकिन्छ $where.=” (post_status IN ('publish','future') AND (post_type = 'post' OR post_type = ”)) “;
म यस प्रकारको मद्दतको लागि खोजी गर्दै थिएँ, तर यो पूरा हुनुभन्दा पहिले पहिलो कोड काटियो। के तपाइँ यस टिप्पणीको उत्तरमा पहिलो प post्क्ति पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ?
माफ गर्नुहोस् कि किर्कवर्डका बारे! मैले पोष्ट सच्याएको छ त्यसैले कोड अब देख्न सकिन्छ!